Madaxwaynaha Kenya oo ka hadlay go’aankii maxkamadda sare – Radio Daljir
Madaxwaynaha Kenya oo ka hadlay go’aankii maxkamadda sare
Seteembar 2, 2017 7:35 b 0
Madaxwaynaha dalka Kenya Uhuru Kenyata ayaa ka hadlay go’ aankii kasoo baxay maxkamadda sare ee dalka Kenya oo ah in dib loogu laabto doorashadii madaxwayne ee dalkaasi kadhacday, sidoo kalena waxba kama jiraan ay ku tilmaamtay doorashadii dib u doorashadii Uhuru Kenyata.
Uhuru oo hadal kajeediyay telfishinka qaranka ee Kenya ayaa sheegay inuu tixgalinayo go’ aanka maxkamadda gaartay xitaa haddii uu ku qanacsanayn, waxaana uu shacabka Kenya uu usoo jeediyay inay isdejiyaan oo ay mujiiyaan nabad galyo.
Maxkamadda sare ee Kenya ayaa doorashadii kadhacday dalkaasi ee madaxwaynaha lagu doortay ku sheegtay mid aan waxba kajirin, maxkamadda ayaa amartay in mar kale la qabto doorasho madaxwayne muddo lixdan beri gudahood.
Uhuru Kenyata ayaa sheegay mar kale inuu tartamayo oo uu wato ajande la mid ah kiisii hore ee doorashada uu ku galay.
Maamul Goboleed Cusub oo Looga Dhawaaqay Soomaaliya (daawo)